अवलोकन अभिव्यक्ति "politeness शहर लिन्छ"
समाचार र समाज, संस्कृति
वर्ष एक भन्दा बढी पहिले क्रिमीआ मा प्रायद्वीप रूस गर्न मिलयो ल्याइयो परिणाम जो एक referendum आयोजित। घटनाको सुरक्षा कुनै पनि चिह्नों बिना छलावरण लगान र मास्क मा सैन्य प्रदान। तिनीहरूले जसको लागि उहाँले "भद्र मान्छे" को नाम प्राप्त, धेरै सही गऱ्यौ।
अभिव्यक्ति को मूल्य
यस सन्दर्भमा, प्रसिद्ध रूसी हितोपदेश चाँडै परिवर्तन भएको थियो "भाग्य को बोल्ड एहसान"। तर यो केवल एक शब्द परिवर्तन। अब यो जस्तै आवाज गर्न थाले: "विनम्र शहर लाग्छ।"
र यो कुनै अत्युक्ति छ। क्रिमीआ र Verkhovna Rada, सिम्फरोपोल र Belbeksky विमानस्थलको सेवकहरू को परिषद, साथै तटीय रक्षा सेना को मुख्यालय र राज्य प्रसारण कम्पनी "क्रिमीआ" - लेट फरवरी, अज्ञात र unidentifiable मान्छे धेरै चाँडै र प्रायद्वीप प्रमुख अंक को एक नम्बर कब्जा एक शट फायर बिना मा।
तिनीहरूले के आफ्नो लक्ष्य आए जहाँ जो कोहीले, यी मानिसहरू हुन् जसले थाहा थिएन। तर, सबै तिनीहरू अत्यन्तै रोकी सञ्चालन भन्ने कुरा स्पष्ट थियो। स्थानीय समाचार पत्र सबै सैन्य र परिवहन सुविधा, तिनीहरूले "भद्रताका साथ अवरुद्ध।" थिए उल्लेख र सैन्य को आस्तीन मा referendum दिन आफ्नो peacekeeping उद्देश्य emphasizing, सफेद मा रिबन बाँधिएको थियो। अभिव्यक्ति यस मूल्य आधारित लैंडिंग छैन भन्ने कुरा रूपमा छलफल गर्न सकिन्छ, र politeness शहर लाग्छ।
अज्ञात सैनिकहरु को व्यवहार characterizes कि अभिव्यक्ति, सुरक्षा प्रमुख कब्जा आफ्नो विमानस्थल रिपोर्ट तिनका मानिसहरू भनेर मध्ये एक साक्षात्कार पछि आए "भद्रताका साथ छोड्न सोधे।" विभिन्न प्रकारका यो वाक्यांश पत्रकार द्वारा प्रयोग गर्न थाले पछि, यो अभिव्यक्ति इन्टरनेट मेमे थियो।
Politeness कसले पहिलो पटक यो वाक्यांश भने शहर ... लिन्छ? यसलाई यो शीर्षकहरू मा सुनिन्थ्यो यो डिजाइन छ मिडिया को कुख्यात घटनाहरू पछि। र वाक्यांश "भद्र मान्छे", पहिलो हुन भने रूसी विदेशी मन्त्री सर्गेई Lavrov विश्वास छ। तथापि, यो वाक्यांश को वाक्यांश तार्किक परिणाम छलफल।
शब्द "भद्र मान्छे" अनलाइन समुदायमा प्रेरणा को एक वृद्धि गर्न वृद्धि दिनुभयो। यसरी, यो रमाइलो, Jokes, कोलाज, ग्राफिक्स र सामाजिक विज्ञापन को विधाहरू फल भयो। "शहर को सौजन्य लिन्छ" - "सामाजिक पोस्टर विज्ञापन" को आदर्श वाक्य र निम्न पाठ: "2014 - रूस मा संस्कृति साल" - इन्टरनेटमा को भुमरीमा सिर्जना गरिएको थियो। निस्सन्देह, यो inscriptions बाहेक, यो छवि छद्मवेषी सैनिक टाउको देखि एक बन्दूक संग टाउको गर्न धारण।
मिडिया मा अभिव्यक्ति को प्रयोग
त्यहाँ वाक्यांश कति चाँडो "शहर को शिष्टाचार लिन्छ" यति चाँडै त्यो भाषा प्रविष्ट गरिएको थियो। दुर्लभ अखबार क्राइमन घटनाहरूको बारेमा बताउन, हेडर रूपमा प्रयोग गरेनन्। यो धेरै इन्टरनेट साइटहरु भरिएको छ।
मई मा सामाजिक सञ्जाल को एक मा गत वर्ष तुरुन्तै धेरै लोकप्रिय बनेको सैन्य सेवाको लाभ, मा एक भिडियो पोस्ट भएको थियो। रिया "नोवोस्ती" रूसी रक्षा मंत्रालय को एक प्रतिनिधि एक साक्षात्कार मा निम्न तरिकामा जवान मान्छे को ब्याज टिप्पणी छ: politeness "मात्र शहर लिन्छ, तर पनि मन जित्छ ..." "आज हामी भन्न सक्छौं"
हामी सुरक्षित सैन्य कर्मियों दिएको परिभाषा गर्ने क्राइमन referendum को सुरक्षा आचरण सुनिश्चित गर्न भनेर भन्न सकिन्छ, रूसी lexicon प्रविष्ट - "। शहर लिएर को शिष्टाचार" दुवै राजनीतिक र घरेलू र, आफ्नो व्यवहार characterizes कि वाक्यांश यसलाई साथ
मार्च घटनाहरू हेडर जस्तै बिना व्यापार संस्करण, सिंगापुर संग व्यापार सम्बन्ध intricacies बारेमा बताउन राख्नुभयो।
दैनिक बोलीमा अभिव्यक्ति प्रयोग
स्वाभाविक दैनिक कुराकानीमा अन्य मिडिया देखि इन्टरनेटबाट सार्नु वाक्यांश उल्लेख गरे। ल्यान्डमार्क यस्तो "जीवन देखि एक तस्वीर।" देखेको हजुरआमा आफ्नो नाति, एक आठौं-grader संग कुरा। नाति शब्द "साहस" र, पाठ्यक्रम संग हितोपदेश देख, पहिलो मध्ये एक छ "भाग्य को बोल्ड एहसान": "Bab सही" - "होइन, - sponds हजुरआमा - politeness शहर लिन्छ! - र नाति नजर हैरान भन्छन्: - साहस हरेक मूर्ख गर्न सक्छन्, र तपाईँले शिष्टाचार पुरा शहर लिन प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ "!
यो वाक्यांश प्रयोग रोचक दृष्टिकोण उद्यमीहरू देखाए। Crimea मा भएको घटना पछि केही दिन को छवि संग चेभरन जारी थियो "एक भद्र शहर लिए मानिस।" र चाँडै ज्योति टी-शर्ट, Sweatshirts, छलावरण लगान मा hoodies सैनिक आए। तिनीहरूले आदर्श वाक्य लागू: को लडी संग "शहर को सौजन्य लिन्छ": "! रूस - ठूलो शक्ति"
मलाई लाग्छ हामी responsibly कि राजनीतिक घटनाहरू वाक्यांश को एक पृष्ठभूमि मा arising मान गर्न सक्नुहुन्छ "politeness शहर लिन्छ" यसलाई पहिले नै लोकप्रिय अभिव्यक्ति स्थिति प्राप्त भएको छ, र अन्ततः यस स्थिति सुदृढ हुन। एकल शट बिना र रगतको एक ड्रप बिना आफ्नो शान्तिमा प्राप्त,: र मूल्य यो unequivocal हुनेछ। र यदि यो अझै पनि व्यवसायको बारेमा जानेछन् - सांस्कृतिक र आदर सम्बन्धको बारेमा केहि।
अनैतिकता - यो ... अनैतिकता व्यवहार
उदाहरण संवादलाई। संस्कृति, देश, राष्ट्रका
Thesaurus - slovar- यो "धन"
Chernobyl संग्रहालय (कीव, एल.एन. Horeb 1): आधुनिक प्रदर्शनी समीक्षा
जहाँ कुलीन वर्गहरु बाँच्न?
"महाकाव्य": प्रयोग गर्न यो शब्द?
सिंड्रोम "pebaldizm": यो के हो, को कारण, लक्षण, निदान र उपचार
100 किलोवाट डिजेल बिजुली: प्राविधिक विशेषताहरु, इन्धन खपत
दर्शन मा तत्वज्ञान के हो
कसरी हटाउन सकिने मिडिया देखि Xbox 360 freeboot मा खेल स्थापना गर्न?
ठीक बाल लागि उचित हेरविचार
कसरी पुरानो जारी गर्न सकिन्छ सिम कार्ड: सुझाव र चाल
क्याथरीन द्वितीय को विधान आयोग, रूसी कानून को विकास मा आफ्नो भूमिका को Convening
को औंलाहरुमा बीच च्याउ। उपचार सम्भव छ!
ट्रांसनिस्तरिया शहर: Tiraspol, Bendery, Rybnitsa। Dnestr मोल्डाभियाली गणतन्त्र
कुत्तों को सबै भन्दा अधिक समर्पित नस्लों: नस्लों को विवरण र प्रकृति
जहाँ एक बच्चा वा साथीहरूसँग पेन्जा जाने?
"कार्डियो स्लिम" - घर मा एक जिम